I-14 ft HVLS Ceiling Fan 133,900CFM PMSM Commercial Abapholi Abakhulu Abapholisayo
Indawo enkulu yokumbozwa komoya ovunguzayo ingaba yi-133900CFM.
I-2.Ideal yokusetshenziswa endaweni enkulu evulekile ukuphakama kungaphezu kwamamitha ayi-3.5.
I-fan efudumele futhi esebenza kahle esebenza ngogesi enkulu, kunciphise ukusetshenziswa kwamandla okushisa kufika ku-30% kusethingi ephansi
Ngabe ufuna ukwenza abagibeli bakhululeke kakhudlwana futhi bonge imali yakho? Sizokunikeza abalandeli bezixazululo ezipholile kunazo zonke bezentengiselwano zezindawo zokuhweba, njengehhovisi, izindawo zokudlela, izinkundla zemidlalo nokunye.
Umlingisi wethu ophahleni wentengiso angazungezisa umoya omningi ngobumnene nangokuthula ukwenza amakhasimende anethezeke futhi ajabule, futhi agcine abasebenzi bephilile futhi bekhiqiza ngokwengeziwe.
Ngokufaka okuphezulu nokuphakama kwesikwele, izakhiwo ezinkulu zezimboni ezinjengejimu noma isikhungo sezemidlalo zibhekana nomoya nenselelo yokuphefumula. Ukupholisa nokushisa izikhala ezibanzi ezahlukahlukene kuyinselele ngoba ukupholisa noma ukufudumeza umoya kungabiza imali eshisiwe kumishini ye-HVAC nezindleko zokusebenza.
Ivolumu yomoya 133931CFM
Isivinini esikhulu 80RPM
Uhlobo lwemoto Izithuthi ze-PMSM
Uhlobo lwabalandeli Ezezimboni, Ezokuhweba, Ezolimo
Iminyaka yesiqinisekiso enomkhawulo 1 (Isikhathi sokuphila kuma-Airfoils)
Blade Izinto Aluminium Ingxubevange
Uhlobo lwentaba Uphahla
Ama-Watts wabalandeli 400W
Inombolo Yesivinini Okuguqukayo
Umbala Wezindlu Zabalandeli Mnyama
Umbala weFan Blade Okumpunga
Inani lamaBlades 6
Izicelo Zemvelo Izimboni, ezentengiso, ijimu
Izizathu zokukhetha abalandeli bokupholisa ophahleni be-OPT OPT
1 Ukwakha induduzo yokusebenza imvelo: Ngevolumu yayo yomoya engu-133900CFM, abalandeli bevolumu ephezulu, abanejubane eliphansi abalandeli abasebenza kahle beHVLS bezentengiso bezindawo zokuhweba. Umoya ojikelezayo mnene futhi ungenza amakhasimende azizwe ekhululekile futhi athuthukise impilo yabasebenzi bakho.
Nciphisa ukusetshenziswa kwezindleko: Ngamandla we-fan we-0.4kw, abalandeli abakhulu bezentengiselwano yisisombululo esonga izindleko esingasiza indawo yakho yezentengiselwano ukugcina izikweletu zokupholisa zilawulwa.
Indawo esemthethweni efana nenxanxathela yezitolo ingazuza kumlandeli wezohwebo
1.Ukufaka fan enkulu yokuhweba ophahleni, abasebenzi bakho bazozizwa bekhululeke kakhudlwana bese bekhiqiza kakhulu.
Amakhasimende akho 2. azobuyela esitolo sakho imvamisa eyengeziwe uma ezizwa ekhululekile. Futhi isivinini esiphansi nomsindo onokuthula kuhle ukuba bahlale.
3.Izitolo ezitolo kunzima ukupholisa, njengoba inendawo enkulu evulekile. Ehlobo, ukushisa okungabekezeleleki kuholela ekutheni izikweletu zokupholisa zikhule ngokushesha. Ngenkathi amandla amakhulu okuhamba komoya wabalandeli bethu abakhulu bephahla bezentengiselwano angaxazulula lezi zinkinga ngempumelelo futhi anciphise izindleko zikagesi.
Langaphambilini I-12 ft HVLS Ceiling Fan PMSM Commercial Fans Yomphakathi 109,200CFM
I-10 Ft HVLS Ceiling Fan - I-PMSM Motor-For I ...
I-12 ft HVLS Ceiling Fan PMSM Commercial Fans Ye ...
Khetha i-10FT HVLS PMSM Motor Industrial Cooling Ven ...